August 2014 - Myanmar News Plus
စားသုံးမှုများတဲ့စားဖိုဆောင်သီးနှံခရမ်းသီးဟာ ခန္ဓာ ကိုယ်အတွက် ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီးပေးတဲ့ အကြောင်း အသိပေးချင်ပါတယ်။ ဦးခေါင်းကအစ ခြေဖျားအဆုံး ဘာတွေကောင်းကျိုးပြုသလဲဆိုတာ လေ့ လာကြည့်ရအောင်ပါ။ ခရမ်းသီးဟာ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝပြီး သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ပမာဏနဲ့ ဂလူးကို့စ်စုပ်ယူမှုကိုထိန်း ချုပ်ပေးနိုင် တာကြောင့် ဆီးချိုသမားတွေစားပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုလက်စထရောပမာဏကိုလည်း လျှော့ ချပေးတဲ့အပြင် သွေးဖိအားကိုလည်း ပုံမှန်ဖြစ်စေတာကြောင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါ တယ်။ ခရမ်းသီးမှာ မှတ်ဉာဏ်ကောင်း မွန်စေတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်တဲ့အတွက် ဦးနှောက်အတွက် အကျိုးပြုပါတယ်။ နောက်ပြီး နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ သံဓာတ်ပမာဏကိုလည်း ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပြီး ကယ်လိုရီပမာ ဏလည်း နည်းတာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချချင်သူတွေ စားပေးသင့်ပါတယ်။ အစာခြေဖျက်အား လည်း ကောင်း တာကြောင့် ဝမ်းချုပ်တာတွေ၊ အူကင် ဆာတွေမဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခရမ်းသီးဟာ အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေနဲ့ လေဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပွားမှုလျော့နည်းစေတဲ့အပြင် ခရမ်းသီးမှာ နီကိုတင်းဓာတ်အနည်းငယ်ပါ […]
ဗိုက်ခေါက်ထူသူများ အဆီကျစေမည့် လွယ်ကူသည့် မြန်မာ့ရိုးရာဆေးနည်း
ဗိုက်ခေါက်ထူနေသူများ အဆီကျစေလိုပါက မြန်မာ့ရိုး ရာ ဆေးမြီးတိုနည်းဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းစွာ အဆီချနိုင် ပါသည်။ လိုအပ်သော ပစ္စည်းများမှာ- ၁။ သဘာဝပျားရည်စစ်စစ် (တစ်နှစ်ကျော်ထားသည့် ပျားရည်အဟောင်း) ၂။ သံပရာသီး ၃။ ဂျင်း သုံးစွဲပုံ ၁။ သံပရာသီးတစ်လုံးကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး အခွံနှင့်အတူ အကွင်းလိုက် လှီးလိုက်ပါ။ မတ်ခွက်ထဲကို ထည့်ပါ။ ၂။ ဂျင်းနှစ်လွာခန့် ထည့်ပါ။ ၃။ ပျားရည် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခန့်ထည့်ပါ။ ၄။ ရေနွေးပူပူထည့်ပြီး အဖုံးအုပ်ထားပါ။ နာရီဝက်ခန့် နှပ်ထားလိုက်ပြီး ရေနွေး အေးလာသည့်အခါ သောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ညအိပ်ယာဝင်ခါ နီးအ ချိန်ဆိုလျှင် ပိုသင့်လျှော်ပါသည်။ တစ်ပတ်ကို ၃ ကြိမ်ခန့်သောက်ပေးပါ။ တစ်လအတွင်း ဗိုက်ခေါက်အဆီ များ ကျသွားပါလိမ့်မည်။ သတိပြုရန်။ ။ […]
ရှော့ပင်းမောထဲက အဆင့်မြင့် ဝက်သားတုတ်ထိုး
ဓာတ်ပုံများ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ ဝက်သားတုတ်ထိုးဆိုတာ မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာတခု မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာတွေနဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာ ရင်းနှီးအသားကျနေတဲ့ အစားအသောက်တမျိုးဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်ရင် အင်မတန်အသန့်ကြိုက်ပြီး ဇီဇာကြောင်တတ်သူတွေ၊ လမ်းဘေး စာ ရှောင်သူတွေတောင် ဝက်သားတုတ်ထိုးနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် သိပ်ပြီး စိတ်မခိုင်တတ်ကြဘူး မဟုတ်လား။ လမ်းဘေးမှာရောင်းတဲ့ အငွေ့တထောင်းထောင်း ဝက်သားတုတ်ထိုးဗန်းကြီးရှေ့မှာ ထိုင်ပြီး ကိုယ်နှစ်သက် ရာရာကို လက်ညှိုးထိုးလို့ လှီးခိုင်းပြီး တုတ်ထိုးတံလေးတွေကို အချဉ်ရည်ခွက်ထဲနှစ်လို့စားရင်း ဟင်းရည်ပူ ပူလေးသောက်လိုက်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီးလေးကိုက်လိုက်နဲ့ ချွေးလေးစို့ရတဲ့အရသာကို မြို့ပြနေ လူတန်းစားအားလုံးလိုလို (အထူးသဖြင့် လူငယ်ဘဝမှာ) ကြုံတွေ့ဖူးကြမှာ မလွဲပါဘူး။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်ပြီးအမိမြေနဲ့ နှစ်ကာလအတိုင်းအတာတခုအထိ ဝေးကွာနေကြတဲ့ မြန်မာတွေ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက် တာနဲ့ […]
ပူစပ်ထုံ ငါးဟင်းချက်နည်းအကြောင်း စနေနေ့က ဧရာဝတီအွန်လိုင်း ဟင်းချက်ခြင်း အနုပညာ စာမျက်နှာမှာ တင်ပါတယ်။ မာလရိငါးဟင်း (ဓာတ်ပုံများ – ဝင်းနိုင်သိန်း) အဲဒီချက်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေးသားထားကြတဲ့ စာဖတ်သူများရဲ့ မှတ်ချက်တွေထဲက တချို့ ကို ကောက်နုတ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဝင်းနိုင်သိန်း ရေးသားတဲ့ ပူစပ်ထုံ အရသာ ပေးမယ့် မာလရိငါးဟင်းကိုလည်း မဖတ်ရသေးသူများအတွက် ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ တို့ကတော့ငါးကြိုက်တယ် ဘယ်လိုချက်ချက်စားချင်တယ် ငါးမကြိုက်တဲ့သူတွေကြိုက်ကြိုက်မကြိုက် ငါးစားပါ အခုခေတ်အဖြစ်များတဲ့အယ်လ်ဇိုင်းမား ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးပါတယ် အစာကြေဘို့ အပူအစပ်တွေကိုထည့်ရတယ်. အက်ဒီရှင်နယ်ကယ်လိုရီအတွက်. အချိုကဲရတယ်. စီချွမ်းပ်ြည်နယ်သားတရုတ်စာဖိုမှူးတွေချက်တာတော့ ဒယ်အိုးထဲကိုလည်းမီးတောက်အောင် လုပ်ပြီးမာလာ ယွီ ကိုချက်ပါတယ် ။ ချက်ပြီးတဲ့ငါးရဲ့အသားဟာ ပှံမှန်ချက်တဲ့ငါးထက်ပိုနုနေပါတယ်။ သိပ်မစပ်တဲ့ ငရုတ် သီးခြောက်ကိုအတော်သုံးပါတယ်။ လျှာကိုထုံစေတဲ့ ငရုတ်ကောင်းနဲ့တူတဲ့ ဟွားကျောင်း တွေကတော့ […]